Eriri Laser tingcha Machine Factory - China Fiber Laser tingcha Machine Manufacturers, Suppliers
SK-GL eriri laser ịcha igwe bụ a tozuru okè ngwaahịa na laser nhazi ụlọ ọrụ na-eduga na akụrụngwa na ụlọ ọrụ na-eru mba na-eduga larịị. Usoro ngwaahịa a bụ nhọrọ mbụ maka ụlọ ọrụ nhazi ihe eji eme igwe. Ọ nwere ikike ịkpụcha ike, ọsọ ọsọ "na-efe efe", ụgwọ ọsọ ọsọ, nkwụsi ike dị mma, nhazi ogo dị elu yana ime mgbanwe siri ike. Ultra-elu-ọsọ ọgụgụ isi eriri laser ọnwụ igwe, mpempe akwụkwọ metal ịcha ngwá ọrụ. Na-enweghị atụ arụpụtaghị na nhazi ziri ezi.
SK-GL eriri laser ịcha igwe bụ a tozuru okè ngwaahịa na laser nhazi ụlọ ọrụ na-eduga na akụrụngwa na ụlọ ọrụ na-eru mba na-eduga larịị. Usoro ngwaahịa a bụ nhọrọ mbụ maka ụlọ ọrụ nhazi ihe eji eme igwe. Ọ nwere ikike ịkpụcha ike, ọsọ ọsọ "na-efe efe", ụgwọ ọsọ ọsọ, nkwụsi ike dị mma, nhazi ogo dị elu yana ime mgbanwe siri ike.
Ultra-elu-ọsọ ọgụgụ isi eriri laser ọnwụ igwe, mpempe akwụkwọ metal ịcha ngwá ọrụ.
Na-enweghị atụ arụpụtaghị na nhazi ziri ezi.